I-Fizzy Mentos Phuza
Umhlobo ungithumelele umnxibelelwano kwiprojekthi ekhompyutheni ebizwa ngokuba yi "Manhattan Project" apho ubhalela khona i-Mentos candy ibe yikhampu yeqhwa kwaye uyifake kwisiphuzo se-carbonate. Xa i-cube ye-ice iyancibilika, i-wax ejikeleze i-candy iya kubonakala kwaye isiselo kufuneka siphume. Ngaba isebenza? Masifunde.
Ukuxhaphaza i-Mentos Phuza izithako
Isiselo kwi-recipe yasekuqaleni ebizwa ngokuba yi-whisky, i-vermouth, ne-bitters (ngokukodwa i-Manhattan kunye ne-cola yokutya), kodwa unokwenza i-rum kunye ne-coke okanye nayiphi na into oyithandayo okanye nje uzame inguqulo engekho yotywala usebenzisa izithako ezimbini:
i-Mentos ™ candy
Yenza i-Exploding Drink
Ndiza kukuxelela ngaphambili: isiselo kunye ne-soda kunye ne-Mentos ayiyi kutshabalala ngaphandle kokuba ikhonkce edibeneyo. Ukuphuza iziphuzo zenza i-messes, kunye kunye nabo bavame ukuphalaza i-glass of sharks, ngoko yinto enhle oku kuselayo ayiyinto enobudlova. 'Ukuphazamisa' kukunye okufunayo apha.
Ukuba ufuna ukwenza ukuqhuma okungalindelekanga, nqabela enye i-Mentos candy emthonjeni we-tray cube tray. Uza kufumana iziphumo ezilungileyo xa ulinda de kube iqhwa lichithwe kwaye lidibanise i-Mentos candy kwikhampu nganye ukuze ibe kufuphi nomhlaba weqhwa. Awufuni ukucwina i-candy emanzini abandayo okanye ukupheka kwayo kuya kutshabalalisa. Ukuba oko kwenzeka, yonke into oyifumanayo xa uyixuba kunye ne-cola yokutya i-cola ene-candy-flavored flavored.
Isiseko sokuthi iMentos iya kubonakaliswa nje ngokuba i-ice cubube iyancibilika. Xa ingubo ye-wax ye-candy iyasabela nge-soda yokutya, isiselo siyotya i-fizz kunye ne-bubble njenge- Mentos yeklasi kunye nomthombo we-soda umthombo .
Ukuba wenza le projekthi ngenjongo okanye mhlawumbi ungabanjwa ukubamba iMentos kwisiphuzo somntu osetyibhileyo, unokwenza nje usebenzise i-candy kwi-soda - akukho icebo leqhwa elifunekayo.
Indlela i-Mentos ngayo kwi-Ice Cubes Trick Works
Phakathi kwezinye izinto, i-gum arabic ebenxiba i-Mentos candy iyanciphisa ukutshatyalaliswa kwendawo ye-soda, ivumela i-carbon dioxide bubbles ukuba ikhuphuke kwaye yanda ngokulula.
Ukugubha i-candy kubamba i-gesi, kubumba iibhola kunye ne-foam. Xa ndizama le projekthi, andizange ndifumane ukuqhuma okuphawulekayo, kodwa ungalindela iziphumo ezingcono xa usebenzisa iglasi elincinci kwisiselo sakho. Ngaphandle kokuba i-Mentos igcoba isiselo, andicinga ukuba umntu ophethe i-cube ye-Mentos-laced iceube uyakubona ukuba kwenzeke ntoni okanye aphethwe yisiphuzo esilawulayo. Le projekthi isamnandi kakhulu.
I-Honeycomb Chemistry Candy Recipe
Iiprojekti ze-9 zeBakala zeNzululwazi
Indlela Yokwenza Ingoma Yomculo
Indlela yokwenza i-Cleanem Homestade Cleaner
Uncedo lweProjekthi yeZenzululwazi
Ngubani Intombikazi kaMariya?
Ukuqonda i-Kami, i-Shinto Spirit okanye i-Gods
Ukudala nokusebenzisa i-DLL ukusuka kwiDelphi
Ukusebenzisa igama elithi 'Que' kunye nezinye iziXhosa
Amashishini kunye neZigalo zeGalofu: Yintoni ongayamkela kwiiNgqungquthela zendawo
I-Chemistry yoMbala weMlilo
Isikhokelo sokuthenga izipho kubaDansi
I-Brady Act Umthengi weGugu Imvelaphi yokuhlola
Ukubikezela iifomula zeeMveliso kunye ne-Polyatomic Ions
Angel Auras njengeMandla
IHamlet kunye nokubuyisela
716 Series Irons kunye ne-816H Hybrids
Intshayelelo eNcwadini kaTito
I-Taurus no-Leo Ukuthandana Ukuthintana